8-Cayaaryahan Oo Caan Ah Kuwaas Oo Kasoo Jeedaan Qoys Taajir Ama Hodan Ah Qaybta 2-aad (+Sawiro) | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Africa » 8-Cayaaryahan Oo Caan Ah Kuwaas Oo Kasoo Jeedaan Qoys Taajir Ama Hodan Ah Qaybta 2-aad (+Sawiro)
Waxaa Qoray: Zakarie Abdi Mohamed
Inta badan aragtida guud ee laga qabo shaqsiyaadka kubada cagta cayaaraan ama xirfad ka dhigtaan waxay tahay inay nolol sabool ah kusoo koreen.
Sidaa darteed xirfad layaasha kubada cagta waxay badankooda u badan yihiin kuwoo kasoo jeedaan qoysas faqiir ah ama aan wax heesanin.
Balse waxaan idiin heynaa 8-cayaaryahan oo hodan ah ama kasoo jeedaan qoysas lacag heestaan oo taajir ah sidoo kalena kubada cagta xirfad ka dhigteen.
Fadlan hoos kaga bogo qaybta labaad cayaartooyda caanka ah ee qoysas taajir ah kasoo jeedaan sidoo kalena kubada cagta xirfad ka dhigteen:
5. Robin Van Persie: Weeraryahankii hore ee kooxaha Arsenal iyo Man United wuxuu leeyahay waalid ahaa jilaayaal iyo sidoo kale fanka caan ku ahaa waxayna heesteen hanti ku filan, sidaa darteed RVP nolol ladan ayuu kusoo bar baaray.
6. Kaka: Laaciibkii ku guuleestay Ballon d’Or sanadii 2007 aabihiis wuxuu ahaa Injineer halka hooyadiisna ay macalimad ahayd, waxayna waalidiintiisa ahaayeen kuwo dhaqaale ahaan isku filan nolol dabaqad sare ahna ku noolaa.
7. Frank Lampard: Laacibkii hore ee kooxda Chelsea wuxuu kasoo jeedaa qoys caan ka ah gudaha UK, aabihiis wuxuu ahaa cayaaryahan West Ham United usoo cayaaray, adeerkiis waa macalinka caanka ah Harry Redknapp, sidaa darteed qoyskiisa waa kuwo ladan Lampard isagana wax rafaad iyo faqiirtinimo sooma arkin.
8. Gerard Pique: Daafaca Barcelona aabihiis waa qareen iyo ganacsade gobolka Catalunya caan ka ah, sidoo kalena hooyadiis waxay agaasime ka tahay isbitaal isla Barcelona ku yaalo, haka reebin in awoowgiisii uu ahaa agaasimihii hore ee kooxda Barcelona barisamaadkii, marka Pique nolol ladan ayuu waligiis dhexda kaga jiray.
Hadii aadan aqrisanin maqaalkaan qaybtiisii kowaad fadlan RIIX HALKAAN